BackGround History » Pyay Technological University
Home » BackGround History
History of Pyay Technological University
On 2nd February 1998, Pyay Institute of Technology was established in accordance with Ministry of Science and Technology(27/1998). In accordance with (73/1998), PIT was named as PTU on 1st July 1998. The undergraduate classes were officially inaugurated on 27th December, 1999.
By the order of MOST (25.1.2007) and in accordance with (041/2007), Government Technical College (Pyay) was incorporated and coalesced with Pyay Technological University on 20th January, 2007.
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၉၉၈-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂)ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၂၇/၁၉၉၈)ဖြင့် ပြည်စက်မှုတက္ကသိုလ်အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၉.၆.၁၉၉၈)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၃/၁၉၉၈) အရ ပြည်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဟူ၍ ၁၉၉၈-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁)ရက် နေ့မှစ၍ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏သင်တန်းအသီးသီးကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ သည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၅.၁.၂၀၀၇ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၀၄၁/၂၀၀၇) အရ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ပြည်)၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား (၂၀.၁.၂၀၀၇)ရက်နေ့မှစ၍ ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် သွတ်သွင်း၍ ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခဲ့ ပါသည်။
(၁၅.၁.၂၀၁၅)ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၅) အရ ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် အရာထမ်းရာထူး(၃၀၀)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၅၆၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၈၆၆)နေရာဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုပါသည်။
Pyay Technological University(PTU) is located in Bago West Division. It has 123.30 acres. It is located beside the high way road, Pyay and Paukkhaung. It is 8 miles far from Pyay.
ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့မှ (၈)မိုင်ခန့်အကွာ ပြည်-ပေါက်ခေါင်း ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပြီး (၁၂၃.၃၀)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။
PTU Map Link
ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်တာ၀န် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော ဆရာ၊ဆရာများ၏အမည်စာရင်း
စဉ် အမည်ရာထူး ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်) M.E(Civil) ၁-၄-၁၉၉၈ မှ ၉-၂-၂၀၀၂ အထိ
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်) M.E(Mechanical) ၂၆-၂-၂၀၀၂ မှ ၂၀-၈-၂၀၀၆ အထိ
ပါမောက္ခချုပ် Ph.D(Civil) ၂၁-၈-၂၀၀၆ မှ ၂၂-၁၂-၂၀၀၉ အထိ
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်) Ph.D(Metallurgy) India ၂၉-၁၂-၂၀၀၉ မှ ၅-၄-၂၀၁၂ အထိ
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်) Ph.D(Mechanical) ၆-၄-၂၀၁၂ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၄ အထိ
ပါမောက္ခချုပ်(တာဝန်) Ph.D(Mechanical) ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၄-၂-၂၀၁၅ အထိ
ပါမောက္ခချုပ် Ph.D(Aero)Russia ၄-၂-၂၀၁၅ မှ ယနေ့အထိ
Copyright © 2016 Pyay Technological University. All Rights Reserved.